အများဆုံးပရိုဆက်ဆာမြန်နှုန်းကိုကန့်သတ်ပါ Linux မှ
ခရစ်စတိုဖာကက်စထရို | | GNU / Linux များ, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက Linux မှာဘာကြောင့်အပူလွန်ကဲနေတာလဲလို့စဉ်းစားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့် Windows မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာမကြာခဏမဟုတ်ခဲ့ဘူး၊ ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတွေးမိခဲ့တယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအပူကြောင့်အပူဖြစ်ပေါ်စေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပိတ်သွားသည်။
live cd ကနေအမြင့်ဆုံးအထိရောက်အောင်လုပ်တဲ့အတွက် linux distro ကို install လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ Laptop လေဝင်လေထွက်ဝင်ပေါက်မှာပန်ကာတပ်ထားရတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ distro ငါအပိုင်းထဲသို့ဝင်သည်အထိရှေ့မှောက်၌ထည့်သွင်းခဲ့ပေမယ့် gnome2သာပရိုဆက်ဆာ၏ကြိမ်နှုန်း (userspace mode တွင်) ပါဝင်သည်ခဲ့ပေမယ့်ငါကထည့်သွင်းသောကြိမ်နှုန်း၌အစဉ်မပြတ်နေဆဲဖြစ် မဟုတ် ondemand ၌၎င်း, ငါကအမြဲတမ်းငါကခွင့်ပြုသည့်ကြိမ်နှုန်းမှာဖြစ်ကိုဖန်ဆင်းသောပရိုဆက်ဆာလိုအပ်သောတဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ပရိုဆက်ဆာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းကိုမည်သို့ကန့်သတ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေစဉ်ကပရိုဆက်ဆာသည်ပရိုဆက်ဆာ၏ ၁၀၀% သို့မရောက်ရှိဘဲအလွန်အကျွံအပူမပေးခဲ့ဘဲ ondemand တွင်ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်ုပ်တို့ terminal တွင်မည်မျှပရိုဆက်ဆာမည်မျှရှိသည်ကိုသိရမည်။
ls / sys / devices / system / cpu / | grep CPU [0-9]
ငါ၏အမှု၌ output ကိုဖြစ်ခဲ့သည်
ဆိုလိုတာကငါမှာ ၂ ခုရှိတယ်
ထိုအခါတစ်ခုချင်းစီကို Processor ကိုအဘို့အသငျသညျရှိသည်
more / sys / devices / system / cpu / cpu [0-9] / cpufreq / scaling_available_frequencies
:::::::::::::: / sys / devices / system / cpu / cpu0 / cpufreq / scaling_available_frequencies :::::::::::::: 2100000 1050000 525000 --More-- (နောက်ဖိုင်: / sys / devices / system / cpu / cpu1 / cpufreq / scaling_availabl :::::::::::::: / sys / devices / system / cpu / cpu1 / cpufreq / scaling_available_frequencies :::: :::::::::: 2100000 1050000 525000
Processor နှစ်ခုလုံးအတွက်၊ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါ 2100000 hertz ရှိမယ်ဆိုရင်ငါအကြာကြီးအပူပေးတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအများဆုံး frequency ကိုကန့်သတ်ချင်တယ်။ ကျနော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်လိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်
/ sys / devices / system / cpu / cpu0 / cpufreq / scaling_max_freq / sys / devices / system / cpu / cpu1 / cpufreq / scaling_max_freq
ငါက start တစ်ခုချင်းစီမှာကပြောင်းလဲချင်သောကြောင့်, ငါ့ကို /etc/rc.local အတွက်ထည့်သွင်းရန်အဘို့အဒါဟာအဆင်ပြေပြီးတော့ငါဖိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်တည်းဖြတ်
kdesu Kate /etc/rc.local
Terminal (nano ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးအယ်ဒီတာအဖြစ်ပြောင်းပါသို့မဟုတ် command ကိုမရိုက်မီ su ကိုသုံးပါ)
#! / bin / sh -e ပဲ့တင်သံ 1050000> '/ sys / devices / system / cpu / cpu0 / cpufreq / scaling_max_freq' echo 1050000> '/ sys / devices / system / cpu / cpu1 / cpufreq / scaling_max_freq' ထွက်ပေါက် 0
ဒါကြောင့် Processor ရဲ့အများဆုံးအမြန်နှုန်းက ၁၀၅၀၀၀၀ ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » အများဆုံးပရိုဆက်ဆာမြန်နှုန်းကိုကန့်သတ်ပါ
တကယ်ကောင်းတာကတကယ်တော့ငါ့မှာ Solus ပါတဲ့ Desktop ပီစီတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါကိုပိတ်ထားလို့မရဘူး။ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ivan Barra ဟုသူကပြောသည်
ဟေး၊ ခင်ဗျားကွန်ပျူတာရဲ့ BIOS ကိုစစ်ဆေး၊ Update လုပ်ခဲ့လား။ ဒါက HP Model လား။ ငါမေးချင်တာက BIOS နဲ့ Intel SpeedStep, AMD cool & Quiet တို့ရဲ့ပြconfigurationနာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ BIOS ကိုမွမ်းမံခြင်းဟာအပူလွန်ကဲခြင်း (အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကအဖွဲ့လိုက်တည်ဆောက်သူ) ဖြစ်ပြီး၊ အခြားတစ်ခုမှာစက်ရုံမှလာသည့်အပူငါးပိကိုပြောင်းရန်ဖြစ်သည် (များသောအားဖြင့်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ) ငွေဒြပ်ပေါင်းများအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာကုန်ကျပြီးတပ်ဆင်သည့်အခါများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များစွာပိုကောင်းသည်။ နောက်တစ်ခုကစက်ပစ္စည်းအတွင်းရှိအမှိုက်သို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်ကိုစစ်ဆေးပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်ကအလူမီနီယမ်၊ အလူမီနီယံ၊ ပလပ်စတစ်များသည်သူတို့ဝယ်ယူထားသည့်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဝယ်ယူနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ။
Iván Barra ကိုစာပြန်ပါ
၎င်းသည် Toshiba Satellite A305D-SP6905R ဖြစ်သည် http://pcxion.com/shop/printinfo.php?products_id=1080
အသစ်ပြIနာပေါ်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တွင်ပိုက်ဆံရှိလာသောအခါ၎င်းကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့ယူဆောင်လာခဲ့ပြီး BIOS ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီတပ်ဆင်။ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်အားအတင်းအဓမ္မမွမ်းမံရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်နောက်ဆုံးတပ်ဆင်ထားသည့် BIOS update ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ငါမှာ Toshiba ၂ လုံးရှိပြီးအပူချိန်ပြproblemsနာမရှိဘူး။ HP ဟာငါမှာ ၁၃.၃ လက်မအရွယ်တက်ဘလက်အမျိုးအစား HP Compaq ရှိတယ်။ ထိုအခါငါ HP တူညီသောပြproblemနာနှင့်အတူဒါဇင်များစွာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပါပြီ၊ အများစုမှာဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာပြwasနာဖြစ်ပြီး၊ Nvidia ဂရပ်ဖစ်များဖြစ်သောပုံမှန်ဂဟေဆော်သည့်ပြwasနာဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်ကစားရသည်။
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Samsung RV408 Laptop 6GB RAM နှင့် LM14 KDE RC x64 ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေနှင့်ဤအချိန်နှင့်ဤ Acer AOD3E netbook နှစ်ခုလုံးအတွက်မော်တာပန်ကာသုံးခုနှင့်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 255 GB RAM နှင့် LM2 KDE RC x14 အလွန်အေးမြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်များနှင့်ပြတင်းပေါက်များဖွင့်ထားချိန်တွင် netbook သာအနည်းငယ်ပူလာသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
တခါတရံမှာသတ္တုတွင်းပူလာတယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ပရိုဆက်ဆာ ၂ ခုရဲ့ကြိမ်နှုန်း
alf @ Alf: ~ $ more / sys / devices / system / cpu / cpu [0-9] / cpufreq / scaling_available_frequencies
/ sys / devices / system / cpu / cpu0 / cpufreq / scaling_available_frequencies
1900000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000
/ sys / devices / system / cpu / cpu1 / cpufreq / scaling_available_frequencies
Alf @ Alf: ~ $
ငါတကယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် ၁.၉Ghz ကအများဆုံးဖြစ်ပါက ၁.၆ Gb ကြိမ်နှုန်းသည်
Reevil ပါ ဟုသူကပြောသည်
လက်တွေ့တွင်၊ ၎င်းသည် application များဖွင့်လှစ်သောမြန်နှုန်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချသင့်သည်။
၎င်းသည်မှန်ကန်သော်လည်းအင်တာနက်၊ ဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ကွန်ပျူတာကိုသာအသုံးပြုပါက၊ ခြားနားချက်ကိုသင်သတိမပြုမိပါ။ ယခုသင်သည် compulsive code compiler ဖြစ်လျှင်ခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
Self- စီမံခန့်ခွဲမှု ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည် Acer Aspire 5315 အဟောင်းတွင်ကျွန်ုပ်တစ်ချိန်ကနှင့်အပြီးသတ်ဖြေရှင်းလိုသောပြinနာရှိသည်။ သို့သော်ငါ၏လမ်းညွှန်သစ်ပင်၏လမ်းကြောင်းသည်သင်ညွှန်ပြသည့်လမ်းကြောင်းနှင့်ကွဲပြားသည်။ cpu0 နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ သို့သော်ထို အချိန်မှစ၍ cpufreq ဖိုင်တွဲကိုမူမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်အခြား cache များ၊ cpuidle, power, subsystem, therm-throttle, topology နှင့် crash - မှတ်စုများနှင့်ဖိုင်များသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးဖိုင်တွဲတစ်ခုမှ scaling_max_freq ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။
cpu freq စကေးကို core2duo ပြီးနောက် menti များအတွက်သာသုံးနိုင်သည်။ pentium D, 4, celeron သို့မဟုတ် mononucleos ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Prescott တွေဟာစွမ်းအင်နဲ့အပူကိုအလဟ was မဖြုန်းတီးပဲအမြင့်ဆုံးအထိအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ငါမှာအမြဲတမ်း ၄၀ (သို့) ဒီထက်ပိုလမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဆောင်းရာသီမှာငါခြေထောက်ကအေးခဲတယ်။
Hehehe me မင်းပေးတဲ့အကြံကိုမင်းမမြင်နိုင်ဘူး… !!!
Gnome (သို့) Unity အတွက်ညွှန်ပြချက်သည် cpufreq ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပရိုဆက်ဆာမြန်နှုန်းနှင့်ပါဝါချိန်ညှိချက်များကိုအပေါ်ဘောင်မှပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ @Christopher Castro၊ ဆောင်းပါးအပေါ်ဂုဏ်ပြုလွှာ၊ တိုတိုနှင့်အသုံး ၀ င်ပါ့မလား၊ သေးငယ်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပဲ၊ လူတွေရှုပ်ထွေးနိုင်သည့်အတွက် CPU / UCP cores (processor) ပရိုဆက်ဆာကိုမခေါ်ပါ။
ကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့အချက်ကတော့ Processor Core နှစ်ခုရှိရင်အပူပြproblemsနာတွေရှိနိုင်တယ်၊ ဖွင့်ပြီးသန့်ရှင်းသင့်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဖုန်မှုန့်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်မှုန့်ကြောင့်မဟုတ်ရင်၊
အကယ်၍ သင် ONDEMAND * အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို activate လုပ်လျှင် Processor အမြန်နှုန်းကိုကန့်သတ်ထားရန်မလိုပါ။ သင်လုပ်ဆောင်မည့်တာ ၀ န်များသည်လေးလံသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုလှန်လှောခြင်းကဲ့သို့ CPU အထူးလိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြိုတင်မသိလျှင် *
ပရိုဆက်ဆာကိုကျွန်ုပ်တို့အရွယ်အစားနည်းလေလေစာမျက်နှာများကိုပြန်ဖွင့်ရန်အချိန်ပိုလိုအပ်လေစွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲလေလေ ONDEMAND အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်စက်လည်ပတ်ချိန်တွင်ကြိမ်နှုန်းကိုအနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့အလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးသည်ကိုသတိရပါ။ ။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ OnDEMAND ကို သုံး၍ system load ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အလုပ်မလုပ်စေရန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ညှိပါ။
w / sys / devices / system / cpu / cpu [0-3] / cpufreq / scaling_governor - - - - ondemand
w / sys / devices / system / cpu / cpufreq / ondemand / up_threshold - - - - 85
w / sys / devices / system / cpu / cpufreq / ondemand / sampling_down_factor - - - - 20
(systemd format နဲ့ nomenclature)
အုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့်အရေးကြီးသည့်နည်းတူကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စက်တွင်အသုံးပြုခြင်းမရှိလျှင် (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်ဟိုက်ဘရစ်ဗီဒီယိုစနစ်ရှိပါက) စနစ်အသုံးပြုသောကျန်စက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူတူပင် POWERTOP ကိုအသုံးပြုပါကဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုပိတ်ထားရန်ဖြစ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်စွာဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းများကိုထားပါ။
ည:0~ $ ကြောင် /etc/tmpfiles.d/optimized.conf
w / sys / kernel ကို / debug / vgaswitcheroo / switch ကို - - - - OFF
#w / sys / class / DRM / card0 / device / power_profile - - - - အနိမ့်
w / sys / လူတန်းစား / DRM / card0 / device ကို / power_method - - - - dynpm
#w / sys / module / snd_hda_intel / parameters / power_save - - - - 1
w / sys / kernel / mm / transparent_hugepage / enabled - - - - madvise
w / sys / kernel / mm / transparent_hugepage / defrag - - - - madvise
w / sys / kernel / mm / transparent_hugepage / khugepaged / defrag - - - - 0
proc / sys / kernel ကို / စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ w / - - - - 0
w / sys / class / scsi_host / host [0-5] / link_power_management_policy - - - - min_power
w / sys / ဘတ်စ်ကား / pci / devices များ / * / ပါဝါ / ထိန်းချုပ်မှု - - - - အလိုအလျောက်
proc / sys / vm / dirty_writeback_centisecs w - - - - 1500
ည:0~ $ ကြောင် /etc/rc.local
# /etc/rc.local: ဒေသခံ multi- အသုံးပြုသူ startup script ကို။
modprobe radeon ပါ
ပဲ့တင်သံ OFF> / sys / kernel / debug / vgaswitcheroo / switch
rmmod radeon ဖြစ်သည်
(rmmod ကိုသတိထားပါ။ အထူးကုသောကဒ်ပြားကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားလိုပါက၎င်းကိုပိတ်ထားစဉ်မော်ဒယ်ကိုပြန်ဖွင့်လိုလျှင်၎င်းစနစ်သည်လှပသော kernel panic ကိုပေးလိမ့်မည်။ )
Mario လိုင်းများ ဟုသူကပြောသည်
ငါတစ်ခုခုနားလည်ပြီဆိုရင်ငါစမ်းကြည့်မှာပါ။ သစ်သီးဝလံတွေ၊ သစ်တော်သီးတွေ၊ ပန်းသီးတွေနဲ့တစ်ဆင့်ချင်းစီကြည့်ဖို့လိုတယ်။ မင်းရဲ့အဖြေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
Carlos Carmona သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ 2ghz dual-core ပရိုဆက်ဆာအတွက်ပုံမှန်အပူချိန်ဆိုတာဘာလဲ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Linux ကို အသုံးပြု၍ ခဏအကြာတွင် CPU ၏အပူချိန်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်စတင်စုံစမ်းခဲ့သည်။
ဒီခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော့်ကိုနာရီပေါင်းများစွာသုတေသနပြုမှုနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါက cpu ကိုဝယ်လိုအားပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ debian ထဲမှာ configure လုပ်ဖို့ရိုးရိုးလေးနည်းလမ်းတစ်ခုပြောပြမယ်။ ဆိုလိုတာက CPU ဟာသူ့ရဲ့ကြိမ်နှုန်းကိုပရိုဆက်ဆာလက်ခံရရှိတဲ့ပမာဏအရအလိုအလျောက်ညှိပေးတယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်အားမဆုံးရှုံးစေဘဲလိုအပ်သည့်အခါအနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဆက်ဆာ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အပူချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ငါ debian ပေါ်မှာဤအမှုကိုပြုသော်လည်း၎င်းသည်မည်သည့် distro နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
cpufreqd နှင့် cpufrequtils packages များထည့်သွင်းပါ။ (ဒီနောက်မှ reboot လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်)
Processor အတွက် module ကိုရွေးချယ်ပြီး load လုပ်ပါ။ ခေတ်မီ intel ပရိုဆက်ဆာများအတွက် modprobe acpi-cpufreq ဖြင့်ပြုလုပ်သည် (debian တွင်မှတ်သားထားပါက lsmod ဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်များအတွက်အလားတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်သည်)
ပထမ ဦး ဆုံး Processor အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ driver ကိုစစ်ဆေးလိုက်ပြီ။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ဖိုင်ကိုကြောင်တစ်ကောင်သာလုပ်ရမယ်။
cat / sys / devices / system / cpu / cpu0 / cpufreq / scaling_driver
ပြီးခဲ့သည့်စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပါက cat command ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဆက်ဆာအတွက်အကြိမ်ရေမည်မျှရှိသည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
cat / sys / devices / system / cpu / cpu0 / cpufreq / scaling_available_frequencies
cat / sys / devices / system / cpu / cpu0 / cpufreq / scaling_available_governors
powersave userspace ရှေးရိုးစွဲ ondemand စွမ်းဆောင်ရည်
cat / sys / devices / system / cpu / cpu0 / cpufreq / scaling_governor
မှတ်ချက်: Debian သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ondemand ကိုတင်သည်။
ဒီနောက်ဆုံး command သည်လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုညွှန်ပြပြီး၊ အများဆုံးအကြံပြုသည်မှာ ondemand ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဝယ်လိုအားအရပရိုဆက်ဆာ၏အမြန်နှုန်းကိုညှိပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CPU ၏အချက်အလက်ကိုသိရန်နောက်ထပ်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု -
cpufreq-info (ကျွန်ုပ်တို့၏ cpu ၏အချက်အလက်ကိုကြည့်ရန်ဤ command ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်):
pufrequtils 002: cpufreq-info (ဂ) Dominik Brodowski 2004-2006
အမှားအယွင်းများနှင့် bug များကိုသတင်းပို့ပါ linux@brodo.de, ကျေးဇူးပြု။
CPU0ကိုလေ့လာခြင်း။
တစ်ချိန်တည်းတွင်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းရန်လိုအပ်သည့် CPU များ - ၀
ဟာ့ဒ်ဝဲကန့်သတ်: 800 MHz - 1.73 GHz
ရရှိနိုင်သောအကြိမ်ရေအဆင့်များ - ၁.၇၃ GHz၊ ၁.၃၃ GHz၊ ၁.၀၇ GHz, ၈၀၀ MHz
ရရှိနိုင် cpufreq အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ: ရှေးရိုးစွဲ, ondemand, powersave, userspace, စွမ်းဆောင်ရည်
လက်ရှိမူဝါဒ - ကြိမ်နှုန်းသည် 800 MHz နှင့် 1.73 GHz အတွင်းရှိသင့်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး« ondemand »သည်မည်သည့်မြန်နှုန်းကိုအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်
လက်ရှိ CPU ကြိမ်နှုန်းမှာ 800 MHz ဖြစ်သည်။
Hardware ကန့်သတ်ချက်လိုင်းများသည်အရေးကြီးသည်။ 800 MHz - ၁.၇၃ GHz နှင့်ရရှိနိုင်သောကြိမ်နှုန်း - ၁.၇၃ GHz၊ ၁.၃၃ GHz, ၁.၀၇ GHz, ၈၀၀ MHz - ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောပရိုဆက်ဆာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြသည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်လက်ရှိ CPU ၏ကြိမ်နှုန်းကိုလည်းညွှန်ပြသည်။
ပရိုဆက်ဆာအားလုံးအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုပြောင်းလဲရန် (dual and quad cores အတွက်လိုအပ်သည်)
cpufreq-set ကို -r -g ondemand
အောက်ဖော်ပြပါ command သည်ပရိုဆက်ဆာ၏အမြန်နှုန်းကိုလည်းပြသသည်။ အကယ်၍ ချွေတာမှုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာ၏ max ထက်နိမ့်သောတန်ဖိုးများကိုပေးသင့်သည် -
$ ကြောင် / proc / cpuinfo | grep -i mhz
grep \_ » CPU ကို MHz \_ » / proc / cpuinfo စောင့်ကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ CPU ၏ဘယ်သောအခါမျှမပြောင်းပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကိုသာကန့်သတ်ပါသည်။
ငါ ondemand ကိုသုံးသည်။
သူငယ်ချင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ရှာနေတာကအတိအကျပါ။
2GHz မှာရှိတဲ့ Athlon II x2503မှာကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းအကျိုးရှိခဲ့တယ်။
1080p ဗီဒီယိုကို linux ပေါ်မှာဖွင့်တိုင်း၊ ကျွန်တော့် CPU က ၁၀၀% သုံးတယ်၊ အခုသုံးတယ်
ပျမ်းမျှ 40 မှ 50% ။
ငါအကြိမ်ရေ 1.8 GHz (မှာဘယ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်) ကို fix လိမ့်မည်ဟုကြောက်ခဲ့သည်
ငါကဒါကိုချိန်ညှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့“ OnDemand” ဟာကွန်ပျူတာမှာပျင်းနေရင်တက်နေတုန်းပဲ
CPU က 800 MHz အထိကျဆင်းသွားတယ်။ 🙂
ငါ၎င်းကိုမူလနှင့် Os နှင့် Ubuntu တို့တွင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်က Fedora 17 တွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သေးပါ။ max_freq ပမာဏပြောင်းလဲသောအခါပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်အားသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ မည်သူမဆို၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်မည်သည့်နည်းလမ်းကိုသိသနည်း။ စကားမစပ်အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး
တကယ်တော့ဘာတွေများဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို fedora 17 မှာ rc.local ဖိုင်မရှိဘူး၊ /etc/rc.d/ ဖိုင်တွဲထဲမှာ /etc/rc.d/rc.local ကိုထွက်သွားစေရမည်။
John Jho ဟုသူကပြောသည်
အာတိတ်သည်ငွေရောင် ၅ ဖြင့်စမ်းသပ်ချက်နှင့် ၁၀ ဒီဂရီအောက် CPU ၏အပူချိန်ကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည် !!!!
Juan Jho အားပြန်ပြောပါ
Oo ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ငါနှင့်အတူပြွတ်ဝယ်ရန်ရှိသည်, ဒါကငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိ။
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် terminal ကိုအသုံးမပြုဘဲမိမိလိုချင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏ CPU အမြန်နှုန်းကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်စီမံနိုင်သနည်း၊ ၎င်းသည်စက်ကိုကျွန်ုပ်စက်ထဲမှမထွက်ခွာမီမှသာကျွန်ုပ်ထွက်ခွာသွားလျှင်၊ ၁၀%၊ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်အတွက်အချို့သော script များ
Juan Carlos Acig ဟုသူကပြောသည်
သင်၏အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ i4-3m cpu ၏ကြိမ်နှုန်းကိုကန့်သတ်ရန်ကျွန်ုပ်အားများစွာကူညီပေးခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပျက်စီးမှုကိုငါစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။
Juan Carlos Achig ကိုပြန်ပြောပါ
Francis ကျွန်းများ ဟုသူကပြောသည်
ဒီအဖိုးတန်လှူဒါန်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားကကျွန်တော့် macbook pro မှာ linux ကို install လုပ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Francisco Islas ကိုပြန်သွားပါ
ကားလို့စ် Diaz ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်…။ လက်ရှိဆော့ဖ်ဝဲ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြပြီးသောစွမ်းဆောင်ချက်ကိုနည်းပညာအဟောင်းဖြင့်အသုံးပြုသည့်သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်။ အဆိုပါအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
Carlos Diaz အားပြန်ပြောပါ
Lucciano Ponti ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ မင်းရဲ့ထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ OpenSuse Tumbleweed မှာအလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Lucciano Ponti အားပြန်ပြောပါ
Free Hardware၊ တော်လှန်ရေးရဲ့အစ
က G + အတွက်ကလပ် MyPaint